Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo u digay Madaxda D/Goboleedyada | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo u digay Madaxda D/Goboleedyada
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo u digay Madaxda D/Goboleedyada
Weli waxaanan dhinac u dhicin xaalada aanan laheyn salka fadhida ee Galmudug oo ay garbaha ka hayaan Madaxda Galmudug oo laba u kala qeybsamay, shacabka maamulkaasi ayaa ku jahwareersan sida ay wax u socdaan.
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi (Carabey) oo hoggaaminaya garab ka mid ah, fariisina ka dhigtay magaalada Cadaado ayaa walaac ka muujiyay in madaxda maamul goboleedyada ay la saftaan Madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), wuxuuna ka codsaday hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada ka codsaday haddii arrintan ay soo faragelinayaan in ay si dhexdhexaadnimo ah ku soo galaan ama ay banaanka ka joogaan.
“Waxaan rabaa inaan u digo Madaxda dowlad goboleedyada oo maalmahan laga dhiganayay garab, Galmudug hal nin malahan, mana ahan inaad garab ka mid ah taageertaan, waxaan adinka codsaneynaa Madaxda dowlad goboleedyada inaad dhammaantiina taageertaan mowqifka Galmudug, hadii aad arrintan soo faragelineysaan si dhexdhexaadnimo ah ku soo gala.” Ayuu yiri Madaxweyne (Carabey).
Dhanka kale Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan qof walba oo dhexdhexaadinaya xaalada Galmudug, wuxuuna dowladda federaalka iyo Beesha Caalamka ka dalbaday in ay arrintan soo farageliyaan, si daaqada looga saaro mad madowga jira.
Xildhibaannada Golaha shacabka iyo Aqalka Sare ee laga soo doortay Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa wada hadal Saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, waxay shalay ku baaqeen ilaalinta heshiiskii Galmudug lagu dhisay oo ay saldhigga u yihiin nidaamka awood qeybsiga iyo dastuurka ka wada dhexayn kara reer Galmudug.